फरक शैलिको गीत 'लौ लौ सररर..' लिएर आए जनक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फरक शैलिको गीत 'लौ लौ सररर..' लिएर आए जनक
प्रतीभावान दाजु भाइ महेश र जनक ताम्राकारको नँया गीत "लौ लौ सररर.." हालै सार्वजनिक भएको छ। यस गीतमा जनक ताम्राकारको स्वर तथा महेश ताम्राकरको शब्द संगीत रहेको छ ।
निकै नै पृथक ढंगको यस गीतमा डोटेली र नेपालि भाषाको सुन्दर प्रयोग पाउन सकिन्छ । ताम्राकार दाजु भाइले पछिल्लो समय नेपाली संगीत बजारमा नँया स्वाद दिइरहेका छन्।
दर्शक श्रोताहरुको साथ सहयोग मिले पक्कै आफुले नेपाली संगीतमा फरकपन ल्याउने कुरामा बिश्वस्त रहेको ताम्राकार बन्धुले बताएका छन । महेश र जनकको जुनकिरी र काफल खान्या कुइयाँ पछील्लो समय निकै रुचाइएका गीत हुन । पहिलो प्रेमको आभासलाइ रमाइलो ढंगले पोक्त गरीएको यसगीतमा भने “लौ लौ सररर पिरिमको आकशैमा , लौ लौ फररर शिमल झैँ बतासैमा,” जस्ता शब्दको प्रयोग भएको छ।
यो गीत अहिले चलन चल्तीमा आएका गीत संगीत भन्दा फरक ढाँचाको रहेको बताइएको छ । यस गीतको म्युजिक भिडियोमा भने अहिलेका चर्चित नायक तथा मोडल आकाश श्रेष्ठ र चर्चित मोडल एलिसा राईको अभिनय रहेको छ । यस गीतको भिडियोलाई सागर प्रधानले निर्देशन गरेका छन् भने रेकर्ड हाउस प्रोडक्सनले निर्माण गरेको हो ।